China Gymnastics Air Mat ၂ မီတာ ၃ မီတာ ၄ မီတာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိုးဖောက်နိုင်သောလေယာဉ်လမ်းကြောင်း Yoga Sport ရန်တိုက်ကွင်းသည်ဖျာများဖောင်းပွမှုဒဏ်မှကာကွယ်ခြင်း 0388 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | Yamazonhome
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခြင်း Air Mat 2m 3m 4m ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Inflatable လေယာဉ်လမ်းကြောင်း Yoga အားကစားရန်ပွဲ pad ပါဖျာများဖရိုဖရဲပြိုလဲဒဏ်ရာကာကွယ်တားဆီး။
နာမည်: 1 × 0.6 × 0.1m ကျွမ်းဘား Air Mat အိုလံပစ်အားကစားခန်းမယောဂ inflatable လေကြောင်းလမ်းကြောင်းအတွင်းမိုးလုံလေလုံအားကစားပစ္စည်းကိရိယာအားကစားရုံ Mat
ပစ္စည်း DWF (နှစ်ထပ်အုတ်ရိုးထည်ပစ္စည်း)
အရွယ်အစား: 2m, 3m, 4m
ထုပ်ပိုး: 1pcs / polybag, ပုံးထဲ၌အပြင်ဘက်
အလေးချိန် ၃ ကီလိုဂရမ်
နမူနာအချိန် - 7-10 အလုပ်လုပ်ရက်
OEM: ဝန်ဆောင်မှုကြိုဆိုပါတယ် (oroer ကြီးအတွက်အထူးစျေးနှုန်း)
နာမည်: 1x0.6x0.1m ကျွမ်းဘား Air Mat အိုလံပစ်အားကစားခန်းမယောဂ inflatable လေကြောင်းလမ်းကြောင်းအတွင်းမိုးလုံလေလုံအသုံးအဆောင်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာအားကစားရုံ Mat
အထူးဒီဇိုင်းအဆို့ရှင်။ ဒါဟာ inflate နှင့် deflate ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ သငျသညျသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
01. Taekwondo ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖျာ။ ဘေးကင်းစွာလေ့ကျင့်ပါ၊ လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းအကယ်ဒမီတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခံရမည်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။
02. ကျွမ်းဘားဖျာ။ အရည်အသွေးမြင့်သင်တန်း၊ ခက်ခဲသောလှုပ်ရှားမှုများကိုမကြောက်ပါနှင့်။
03. ကိုယ်ခံပညာဖျာ။ အထူပစ္စည်းကိုအသုံးပြု။ Excellent ကအရည်အသွေး။ မှဝန်ဆောင်မှုဘဝ။
04 အားကစားဂိမ်းများအတွက်လုံခြုံရေးဖျာများ။ လှပသောလေထု။ လေ့ကျင့်ရေးနေရာပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အဆင့်မြင့် Make ။
05. အထူးသက်ရောက်မှုဖျာ။ ပြီးပြည့်စုံသော shock shock စုပ်ယူမှု။ မြင့်မားသောအမြင့်ကိုခက်ခဲစေသည့်တန့်များကိုနာကျင်မှုမရှိတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ရှိသည်။ သင်စိတ်ကျေနပ်စေမည့်ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲ။ ထုတ်လုပ်ရန်သေချာစေပါ။ ချောထုတ်ကုန်တိုင်းကိုထုတ်မပို့မီတင်းကြပ်သောစစ်ဆေးမှုကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များနှင့်တင်ပို့မှုထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ သင့်အားထောက်ပံ့ပေးသောထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားကြောင်းသေချာပါစေ။
တစ်ခုချင်းစီကို inflatable ခေါငျးအုံးတိကျခိုင်မာစွာစမ်းသပ်မှုကိုခံယူ။ အားလုံးတစ် ဦး ချင်းစီထုပ်ပိုးနေကြသည်။ သီးခြားလွတ်လပ်သောပုံးများထုပ်ပိုးခြင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်။ ကိုင်တွယ်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ရှေ့သို့ Unitarp ရေပေါ်အလွယ်တကူသုံးနိုင်သော Yoga Mat အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ Eva Non-Slip Pad 0389 နှင့်အတူရေကူးကန်ရေယောဂဖျာများ
နောက်တစ်ခု: မြင့်မားသောသေတ္တာကုတင်အစိုင်အခဲသစ်သားနှစ်ဆအိပ်ရာသိုလှောင်မှုအိပ်ရာ # 0111